Basa rekuchengetedzwa kweSan Antonio
Nyika dzakabatana Texas San Antonio
Mafuta emafuta akakwirira. Yakaderedza nguva kubva kubasa. Nyaya yacho inoramba ichienderera mberi. Asi, nokuda kwechikonzero chipi nechipi, vazhinji vekuAmerica vari kusarudza 'kugara' muguta ravo rokumusha pasinei nezororo rekugara. Kana iwe uri pakati peboka rinokura re 'kugaracationers' uye zvichiitika kuti ugare mukati kana pedyo neSan Antonio, hauzove nechinetso chiduku kuwana nzira dzekushandisa nguva yako yekugara.
Gungwa Guru kwenguva yakareba rave richizivikanwa semutungamiri muzviratidzo zvegungwa uye varaidzo yemvura. Gungwa Muguta reSan Antonio rinorarama kusvika kunebhadharo yaro, ine marita mararamiro anoratidzira uye kuratidza, misasa yevasasa, kutasva kunofadza, paki yemvura nezvimwe.
Tora Ride paMapapiro matanhatu Fiesta Texas
Mazana matanhatu eSan Antonio's Fiesta Texas ave imwe yeTexas 'yepamusoro yezvitsvaga kubvira pakatanga. Ichi chikuru chepaki yepaki inopa chete "pasi" isina kuputika kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, pamwe nekukwira kupfuura 100 - kusanganisira Tony Hawk's Big Spin, kuratidza, mvurapark nezvimwe.
The San Antonio Riverwalk ndeimwe yeTexas 'inonyanya kukoshesa vatashanyi. Mukuwedzera kune maonero anofadza uye kutengesa zvakanakisisa, Riverwalk iri kumba kune dzimwe nzvimbo dzekudya dzakanakisisa zveSan Antonio.
The Alamo haisi imwe chete yeTexas 'inonyanya kukosha yezvigaro zvekare, inowanikwawo kune dzimwe nyika dzinowanikwa mune dzimwe nyika, uye dzinopfuura 2,5 mamiriyoni. Kunyange zvazvo vazhinji veTeans vakaona Alamo, kana iwe uchigara muSan Antonio, kudzokerazve kuAlamo inzira yakanaka yekushandisa nguva panguva yekugara kwako.
Enda kune imwe Museum
Sezvo kuTexas 'nzvimbo inonyanya kuzivikanwa, San Antonio ine zvakawanda zvokuona nekuita. Zvisinei, vashanyi vakawanda kuAlamo City havazivi dzakawanda zvemasimamende dzakanaka dzakapararira muguta rose.
Kuratidzwa HemisFair Park
Pakutanga yakavakwa kuti iite Fair Fair World, 1968, HemisFair Park yakave iri imwe yenzvimbo dzakakurumbira dzehurumende kubva pakugadzirwa kwayo uye ine chimwe chezvimwe zviratidzo zvechiratidzo cheAlamo City - Tower of the Americas.
San Antonio ndiTexas 'inonyanya kuzivikanwa nzvimbo dzekushanyira kusvika kure. Zvisinei, kunze kwezvose zvinonakidza zvinowanikwa muAlamo City kune mimwe mitambo mikuru inoshevedza imba yeSan Antonio gore negore.
Yakagadzwa muBulverde, kunze kweSan Antonio, Tejas Rodeo ine makwikwi ekukwikwidzana kwekambani rodeo, Texas-style BBQ, nzombe ye mechanical, mimhanzi inorarama nezvimwewo.
Kuramba Kwakapoteredzwa Mukati Makasikati Makwenzi
Iri pedyo kunze kweSan Antonio, Cascade Caverns inopa vashanyi kutarisa pasi peTexas Hill Country. Iyo cavern inogara 68 degrees gore kumativi ose-ichiita nzvimbo yakakwana yekurova kupisa kwezhizha - pamwe iyo inosvika mvura yakaita mamita 100 pasi pevhu!
Kuramba ku Natural Natural Caverns
Chishamiso chepasi pevhu, Natural Bridge Caverns inoratidza mhuri iyo rutivi rwepasi vangave vasina kuona. Mukuwedzera kune zvakasiyana-siyana zvezvikepe zvepasi, Natural Bridge Caverns inopa mhando yepamusoro-pasi mabasa edzidziso yevana vemakore ese.
16 Zvinhu Zvausina Kumbotaura Nezve Alamo
Aquatica paGungwaZvino San Antonio
Spooktacular Halloween Events muna October
Texas Tropical Hotspots
San Antonio Gay Dzimba dzekudzivirira uye zveCabonde MaClubhu Guide
Rudo rwemasango muSan Antonio
Liege, Belgium Travel Guide
Chinangwa chaicho chekukwazisa "Yasou" muGreece
Bevo: Yunivhesiti yeTexas Mascot
9 Mazano eZuva riri kuU.S. Open in Flushing Meadows
Kick Off yeSan Diego's Holiday Season pamwe naamai Goose Parade
Zuva reGore Idzva Zviitiko mu Memphis Area
Savvy Mazano Okuwana Kuwedzerwa Kukosha
Kwokufadzwa Negore Idzva Iva Moto Moto muMinneapolis naSt. Paul
IFC Skyscraper kuHong Kong
Nzira Dzokuwedzera Kuenda Kwebhizimisi kuAustralia
Kutungamirirwa kweMutungamiri weMutungamiri 2017: Zviitiko muWashington, DC